SIDA LOO DARYEELO TALOOYINKA ORCHID EE BEERAHA UBAXA - DHIRTA GUDAHA
Sida loo doorto orchid marka aad iibsaneyso
Isagoo go'aansaday inuu dego orchid, waxaan tagnaa dukaanka ubaxa ee loogu talagalay. Qeybaha dukaamada ubaxa waa mid aad u weyn, noocyada kala duwan ee alaabooyinka la soo bandhigay ayaa madax u noqon kara.
Waa muhiim! Waxaa muhiim ah in la fahmo in muuqaalka ubaxa quruxda leh ayaa si fiican u dhici karta, sidaas darteed waa inaad mar walba fiiro gaar ah u leedahay xaaladda geedka oo dhan.
Xaaladda xididada iyo caleemaha
Doorka weyn waxaa lagu ciyaaraa tayada nidaamka xididka. Waxaa ugu wanaagsan in la qaato ubax leh xididdada si fiican u horumarsan. Haddii nidaamka xididka uu caafimaad qabo, ka dibna midabkiisu wuxuu noqon doonaa mid naxwe ah ama midab cagaaran.
Haddii talooyinka xididada ay yihiin kuwo cagaaran dhalaalaya, ka dibna orchid waa wejiga koritaanka firfircoon, taas oo macnaheedu yahay in aysan macquul ahayn cudur kasta. Fiiri xaalada nidaamka xididka waa mid sahlan, tanina waxay ku ruxreysaa dhoobada ubax - haddii uusan ciribta lahayn oo aan deldelayn, wax walbana waa ku fiican yahay xididada.
Ma taqaanaa? Haddii xididdada orchid ay banaan yihiin oo jilicsan yihiin, markaa waxay bilaabataa in ay dhinto..
Orchid caafimaad leh oo macquul ah ayaa leh cufan, caleemo adag oo leh midab cagaaran oo hodan ah. Mararka qaarkood waxaa jira ubax leh caleemo cagaaran iyo iftiin cagaaran. Ubax caafimaad leh wuxuu leeyahay wax yar oo casaan ah. Haddii uu orchid leeyahay caleemo iyo caleemo qallajin, ka dibna waa inaadan u iibsan.
Waxaa lagama maarmaan ah in la diido in la iibsado ubax leh ubax ama midab leh. Haddii ubaxa uu leeyahay hoos ah oo cad oo caleemo ah, ka dibna waxaa lagu hayaa meel gudcur ah, oo aad u dhalaalaya (jaalle ama casaan cas) waxay tilmaameysaa xad-dhaaf ah. Orchid, kaas oo caleemaha la duubay qaliin, koray iyada oo aan qiyaasta qoyaanka saxda ah, iyo joogitaanka dhibco iyo dhibco muujinayaan joogitaanka cayayaanka waxyeello leh.
Waayo, nolosha orchids lama aqbalo si ay u isticmaasho ciidda. Aad bay u culus tahay, ma ogolaanayso hawada ku filan iyo qoyaanka xididada, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho substrates kala duwan. Ciidda Orchid waxaa laga soo qaataa ciid, jilif, perlite ama vermiculite, dhoobo granulated, dhuxul, xoorto iyo shiil.
Waa muhiim! Dhulka beerta loogu talagalay orchids sii kordhaya looma isticmaalo!
Aad bay muhiim u tahay in la barto sida loo kala saaro geedka baaluqa iyo dhalashada dhalinyarada. Orchid qaangaar ah oo awood u leh in la barbar dhigo oo lagu dhufto had iyo jeer waa mid ka qiimo badan in ka badan seedling, taas oo weli waa in ay koraan muddo dheer. Geedka yar yar wuxuu leeyahay caleenta aad u yar, marka la barbar dhigo orchid horay loo sameeyay.
Waa muhiim! Qoryaha ayaa ka maqan faafidda.
Goobtu waxay si joogto ah u tahay muddada koritaanka firfircoon ee caleemaha cusub, nidaam kasta oo cusub waa inuu ka weyn yahay kii hore. Orchid baaluq waa qaali, tan iyo ubax hore loo sameeyay waxay ku raaxaysan kartaa ubax dhowr jeer sanadkiiba.
Qodobbadu waxay ku jiri doonaan dhowr sano ka dib. Haddii aad rabto orchid sababta oo ah ubax qurux badan, waxaa ka wanaagsan inaad doorato ubax weyn weyn.
Xaaladaha ku habboon ee orchids sii kordhaya
Marka guriga la keenay ubax, su'aal macquul ah ayaa soo baxday: sida loo daryeelo orchid? Orchid waxaa loo arkaa ubax aad u culus. Si loo helo orchid jiritaan raaxo leh waxay u baahan tahay ciidda ku habboon, iftiinka, waraabinta saxda ah, qoyaan gaar ah, helitaanka bacriminta lagama maarmaanka ah iyo waqtigii transplanting.
Xulashada carrada iyo dheriga orchids
Sida horey loogu soo sheegay, hawsha ugu muhiimsan ee ciidda iyo dheriga for orchids - waxay ku sii haysaa ubaxa meel qumman, oo hawada ku jirta iyo ilaalinta xididada qoyaanka xad dhaafka ah. Doorka carrada waxaa loo isticmaalaa substrate, taas oo ay ku jiraan isku dhafka dabiiciga ah, dhogorta, jilif, dhoobo, dhuxul iyo ciid oo leh vermiculite ama perlite.
Dhamaan waxyaabahan oo dhan waa la jajabiyey, ku dar caleemaha qallalan iyo qanjaruufo carrada beerta. Sababtoo ah Halabuurka, substrate ayaa hayn doona qadarka saxda ah ee qoyaanka iyo dhammaan walxaha waxtar leh.
Sida dheriga, waxaad isticmaali kartaa weelasha dabka ku dabooli kara gudaha subagga, tusaale ahaan - dheriga caagga ah ee ugu caamsan, taas oo ay jiraan meelo badan oo biyo lagu daadiyo. Sidaa daraadeed muuqaalka uusan ka sii darin, waxaa la gelin karaa dherjir xarig ah, mesh ama dambiisha.
Ma taqaanaa? Substrate waa jawi horumarinta noolaha, oo ay ku jiraan nafaqooyin badan.
Heerkulka ugu wanaagsan ee horumarinta orchids guriga ayaa u dhaxaysa +18 ilaa +27 degrees Celsius inta lagu jiro maalinta iyo min +13 ilaa +24 habeenkii. Haddii aqalkaagu uu si fiican u kululeeyo, ka dibna isku day inaad nadiifiso orchids meel qabow ah habeenkii.
Isgaadhsiin isdaba-joog ah oo orchids ah meel qabow ah habeenkii waxay ka caawineysaa ubaxka inuu dhaqso u koro, waxana uu awood u yeelan doonaa inuu sii daayo ubax cusub. Ku dhowaad dhammaan noocyada orchids waxay u adkeysan karaan iskeelka kulaylka, laakiin marka heerkulku hoos u dhaco, yareeyo waraabinta orchid, iyo marka heerkulku kor u kaco, waa in la kordhiyaa waraabinta.
Sida iftiiminta, waa inay noqotaa mid dhalaalaya, markaad firdhiso. Galka qorraxda tooska ah wuxuu u nugul yahay ubaxa. Haddii dhirtu hayso iftiin ku filan, ka dibna waxay kugu farxi doontaa ubaxiisa.
Waraabinta iyo ku buufinta orchids
Ha ilaawin waraabinta saxda ah iyo fuuq-celinta orchid, iyadoo kobcinta guuleysiga iyo ubaxu ku xiran tahay. Meeqa jeer iyo inta badan waxaad u baahan tahay inaad biyo u qorto ubaxa waxaa saameeya qalajinta iyo heerkulka hawada ee qolka, iftiinka, cabirka dheriga, iyo waxa wejiga xilliga sii kordhaya ee orchid ku jira.
Waxaa la rumeysan yahay in orchid ay u dulqaadanayso si fiican u qalajinta, iyo biyo-qulqulka, liddi ku ah, dhimanaya. Haddii ubaxu aanu lahayn qoyaan ku filan, ka dibna caleemihiisa ayaa isku xidhan oo jabin, iyo haddii qoyaanka uu aad u badan yahay, caleemuhu waxay noqon doonaan huruud, madow oo jilciya, oo xididdadu way qudhmi doonaan.
Kordhi xaddiga biyaha loo baahan yahay inta lagu jiro marxaladda kobaca firfircoon. Inta lagu jiro nasashada kadib ubax, xilliga jiilaalka, marka iftiinku uusan ku filnayn oo uu noqdo mid qabow, waxaad u baahan tahay inaad yareyso waraabinta.
Si ay orchid si fiican u Bloom, waa in si joogto ah la quudin leh bacriminta dheellitiran. Waxaa ugu fiican oo dhan, haddii aad taas u iibsato qalab gaar ah oo bacarinaya orchids. Raac tilmaamaha bacriminta, iyo ubaxaaga ayaa ku farxi doona wakhti dheer leh ubaxiisa.
Nadiifinta wanaagsan iyo goynta wakhtiga ku habboon waa fure u ah koritaanka ubaxa wanaagsan. Laakiin waxaa muhiim ah in la fahmo in dhicinta ku xigta ay tahay walaac weyn oo geedka. Qalitaanka ka dib, orchid way ku xanuunsan kartaa wakhti yar, joojiso koritaanka xididada iyo dib u dhigista ubax.
Beeralayda khibraduhu waxay ku talinayaan in ay soo celiyaan orchid saddexdii sanaba mar. Waqtiga ugu wanaagsan ee transplanting waxaa loo tixgeliyaa inay tahay guga hore, inta lagu jiro xilliga firfircoonida ubax ee firfircoon. Diyaarso qalabka lagama maarmaanka ah ka hor inta aadan ku tallaalin:
Waa muhiim! Ka hor inta aanad shaqeynin, ku daawee qalabyada aalkolada si aad uga ilaaliso ubaxa jeermiska.
Hadda waxaad ku dhaqaaqi kartaa beerka.
Xasuuso dheriga gacmahaaga si aad u hesho substrate iyo xididada laga soocay dheriga. Si taxadar leh uga saari dheriga.
Nadiifi xididdada substrate hore.
Iska hubi xididada, ka takhalus cayayaanka suurtagalka ah.
Ka saar caleemaha qashinka ah oo la qalajiyey, iyo sidoo kale caleenta hoose.
U oggolow xididada qallalan 8 saacadood.
Dheji dheecaan ah ku dar dheriga lagu buufiyo. Ku rid orchid dusha sare oo ku rusheeya substrate. Qodobka korniinka waa inuu noqdaa mid dusha sare ku sii jiraya.
Ha walaaqin substrate-ka badan. Laakiin xusuusnow in orkutka transplanted qasab kuguma dabbaalan dheriga.
Orchid dhalmada guriga
Haddii aad horay u leedahay orchid waqti dheer, waxaad u hoggansatay dhammaan shuruudaha lagama maarmaanka u ah in lagu hayo orchid guriga, ka dibna aad u badan tahay inaad rabto inaad ka koreyso dhowr ka mid ah laan. Waxaa jira dhawr fursadood oo loogu talagalay orchids taranta, aynu ka fikirno iyaga.
Tani waa hab sahlan oo lagu koro ubax, kaas oo aad ku kori karto nooc kasta oo orchid ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto qof weyn iyo orchid ballaaran, si taxadar leh uga soo qaad dheriga iyo kala-sooc qalabka dhulka.
Isticmaal mindi aad u fiiqan, gooyo rhizome galay qaybaha loo baahan yahay qaybaha (waa inaad ka baxdaa ugu yaraan seddex basal oo khatarta ah qayb kasta). Daweynta xididdada dhuxusha, dhirta weelal gaar ah iyo daryeelka ubax sida caadiga ah.
Noocyada qaar ee orchids waxay leeyihiin caleemaha lateral. Kuwani waa geedi socodka goonida ah ee warshadda hooyada ee ku wareegsan. Haddii aad rabto inaad dacaayado orchid iyadoo la isticmaalayo caleemaha lateral, ka dibna bixin taxadar leh in beerista caleemaha kuwaas.
Caleemaha dhinaca waxaa laga soocaa ka soo baxa ugu weyn ka dib daryeel wanaagsan iyo buufin joogta ah, ka dibna waxaa lagu dhejiyaa dhar gooni ah waxaana loo eegay sidii xarun madaxbannaan.
Neefsashada nalalka gaboobay waxay dhacdaa ka dib marka la isku daro qaybta rhizome. Ka dib markaad kala qaybsatid xasilloonida oo aad ku kala bixisid dhir kala duwan, ubaxa wuxuu bilaabaa inuu koro.
Dherigaas, halkaas oo ay jiri doonaan nalalka gaboobay, orchid ayaa si tartiib ah u kori doona, sababtoo ah guluubka hore waxaa ku jira budo aan ahayn mid aad u horumarsan, taas oo caan u ah, caleemaha caafimaadka leh ayaa kori doona.
Waxaad isku dayi kartaa inaad ku koriso orchid leh gooynta, haddii masaafo gaar ah loo hayo inta u dhaxaysa nudaha la soo saaray. Si arrintan loo sameeyo, mindi fiiqan oo nadiif ah xagal beelay.
Dhuxulku wuxuu jeermiska ka nadiifiyaa qaybaha wuxuuna ku beeri karaa gooynta dhar gooni ah. Gacanka waxaa loo hayaa sidii geedka isku dhafan, ka dibna waxaad ku farxi doontaa muuqaalkeeda kale orchid oo kale.
Orchid waa ubax furan oo ubax ah, kaas oo u oggolaanaya dhalida iyo daryeelka ee guriga, laakiin waa suurtogal in la koro orchids ka soo abuurka guriga. Sababta ugu weyn waxaa loo tixgelin karaa suurtogalnimada in orchids kor u kaco shaybaarka.
Dhammaan tani waa sababta oo ah xaaladaha dabiiciga ah ee miraha dhirta ay u kobcaan, helitaanka nafaqo iyada oo loo maro isbuunada iyo fungus, iyo orchids nudaha nafaqada ayaa si fudud u maqan.
Adiga, dabcan, waxay sameyn karaan tijaabin noocan oo kale ah. Haddii ay guuleystaan, waxaad si ammaan ah u tiirsanaan kartaa ixtiraamka weyn ee saynisyahanka iyo abaalmarinnada qaarkood.
Cudurada iyo sida loo wajaho
Orchids waxay u baahan yihiin daryeel joogto ah. Daryeelka aan habooneyn ama dib u dhigan wuxuu noqon karaa mid halis ah oo ku dhaca xayawaanka, taasoo keenaysa cuduro kala duwan. Marka laga hadlayo cudurka ubaxa, daaweyntu waxay qaadan kartaa waqti aad u dheer, waxaana fiicnaan laheyd haddii daaweyntu ay caawiso
Cudurada viral ee orchids waa, mabda 'ahaan, dhif. Laakiin haddii aad ogaato in caleemaha orchid ay ku daboolan yihiin finan masagada, dhibco waxay sameeyaan xargaha yar yar iyo wareegyada, ka dibna, waxay u badan tahay, tani waa cudur fayras ah. Haddii cudurka fayruska la xaqiijiyo, waa lagama maarmaan in la gubo ubax sida ugu dhakhsaha badan.
Sababtoo ah cudurrada bakteeriyada, caleemaha ubaxyada ayaa lagu daboolaa waxyaabo la mid ah bakteeriyada. Dhibcaha, haddii aan la daaweyn, waxay noqdaan boogaha qoyan, caleemuhu waxay noqdaan kuwo jilicsan oo jaale ah. Daaweynta kiiskan, kaliya hal wax - gooyaan aagga cudurka qaba, waxay ku hawlan tahay iodine iyo meelaha deriska ah.
Waxaa jira dhowr nooc oo ah noocyada ugu waaweyn ee cudurada fungal ee orchids.
Anthracnose. Calaamadaha cudurka fungal waa yar yar, dhibco bunni ah caleemaha. Waqti ka dib, haddii aadan talaabo qaadin, waxay ku biiraan meelo adag oo madow oo leh jaalle ama casaan.
Sababta ugu weyn ee cudurkan waxaa loo tixgeliyaa qoyaan badan iyo biyo joogta ah dheriga. Cure Cudurkan waa mid aan macquul ahayn gooyaan aagagga ay saameeyeen hoos ugu dhig unugyada caafimaadka leh. Ku dhaji aagga jarjaran ee dambaska.
Macmacaanka macaanka. Haddii dhirta la daboolay ubaxyada cad, ka dibna naso hubi - waa wax xayrta leh. Funguskaan wuxuu keenaa qalajinta iyo geerida aagga ay dhibaatadu saameysey.
Fungus-ka ayaa u sabab ah kor u kaca heerkulka hawada. Daaweyn waxay u baahan tahay inay ku buufiso orchid xal sulfur kolloid ah. Ka hor inta ku xereen, biyaha ubaxa si fiican.
Qamadi ciriiri. Dhibaatooyinka Brown ee saameeya ubaxa oo dhan waa calaamad of caaryada cawl. Waxay u sabab tahay xadgudubyada biyaha iyo xaaladaha heerkulka. Daaweyn isticmaal daroogada "Immunocytofit".
Sida aad arki karto, sii kordhaya orchid ma aha hawl fudud. Laakiin ubaxkan quruxda badani waa mid u qalma. Ha illoobin talooyinka xanaanada, iyo orchid aad kuugu farxi doonto waqti dheer.